Imiqathango kunye neemeko | KwiiTye zeeLebhu
IIMIGAQO EZIKHULU NEEMIGAQO
Zonke iirhafu zihlala eRupee yaseNdiya.
I-GST 5% isebenzayo kwixabiso lemali-mali.
Iindwendwe zicelwa ukuba zenze i-vehicle ihlolwe ngokwawo ngaphambi kokusetyenziswa. Ziyakucelwa ukuba zigcine impahla yazo ezigcinwe phantsi kwazo. Asixhomeli nawuphi na uxanduva lokulahlekelwa.
Ukuba ngaba uhlobo lweemoto njengerikhwizishini ngalinye alufumaneki kwezinye izizathu ezingalindelekanga, uhlobo olufanayo lweemoto luya kunikwa kwindwendwe.
Ukubonwa kwembono kuya kuba njengoluhambo kuphela kwiendlela ezihamba kakuhle.
Umqhubi akanako ukunyanzeliswa ukuba aqhube ngesantya esiphezulu kunomyalelo phantsi kwe-Indian Motor Vehicle Act. Kufuneka ucelwe ukuba ungabikho ukuhamba ebusuku.
Ukulungelelaniswa kokulungelelaniswa kweziTwendwe, iiTye zeeNtshontsho zeNtsundu ziya kulungelelanisa ukuhlawula iiRhafu zokuPaka / iiRhafu zeeToll kunye neNkxaso-mali yeeNgingqi eziMawulo-mali eziza kuhlawulelwa nguMninimzi ukuya kumqhubi kumveliso yeeRiphabliki ekupheleni komsebenzi.
Kwiimisebenzi zengingqi, i-Driver's Night Allowance iya kuhlawulwa phakathi kwe-22.00 ukuya kwi-06.00 Hrs. Zonke ezinye iintlawulo ezongezelelweyo kufuneka zihlawulwe kuye ngemali ngexesha lokusetyenziswa.
Ngexa uqhuba ukuhamba ngeendlela ze-Ghat, u-Air-Conditioning uya kuhlala uguqulwa.
Ukuze uphephe i-jam ye-traffic kunye nezinye iimeko ezingalindelekanga ezinokubangela ukulibaziseka, isaziso sokuqala esaneleyo sinikezelwa kwi-Airport / Railway transfers.
Iifomati ezihambelayo zifuneka ukuba zisayinwe ngumsebenzisi ukuqinisekisa ukusetyenziswa. Izikhalazo ezilandelayo azihambelani.
Iindwendwe zicelwa ukuba zihlole umgangatho wethu kunye nokusebenza kwaye zizalise ifom ye "Feedback" ukuba inikezwe kubo nguChepharityhulam, Oku kuya kusinceda sikhonze kangcono.
Iindleko ziya kuphakanyiswa kwiKlayenti / Indwendwe ngaphandle kokuba kubhalwe ngokubhaliweyo. Imodi yentlawulo kufuneka icetyiswe ngokucacileyo ngexesha lokubhuka.
Iingxowa-mali ziya kufakwa kwi-Fortnight-basis. Iintlanzi zeNtshonalanga zivumela i-credit card yeentsuku ezili-15 ukususela ngomhla wokufumana iBhili ekusebenziseni iSivumelwano. Ukwandiswa kweeNkcazo zeNkcazelo zeTyala zeTyala ziyakucelwa ngokubhaliweyo ubuncinane kwiiyure ze-48 zokufumana ibhilikhwe.
I-Tariff ingentla ixhomekeke ekumemezeni ngokulinganayo xa kwenzeka ukunyuka kwiindleko ze-Fuel okanye i-Govt. Izibonelelo zerhafu.
Ukunyuswa kwesithuthi kwiBhubaneswar kunokwakho ukuqonda kweSand Pebbles.
Iintlawulo zinokucwangciswa ngekheshi okanye nge-/ c payee Hlola / iDD / PO elandelwe "I-Sand Pebbles Tour 'n' Uhambo (I) Pvt Ltd."Iintlawulo zingaphinde zilungiswe yiCredit Card / RTGS okanye i-NEFT (Intlawulo ngekhadi lesikweletu iya kuhlawulwa i-3% eyongezelelweyo).
Ukuhlawula ngeKhadi leMatyala, iNombolo yeKhadi kunye noMhla wokuPhuma kufuneka uthunyelwe ngeposi / ifeksi ngexesha lokuPhumela. Ukuba ngaba ukufikelela kukuhlaziswa, ukubhuka iKlayenti / Indwendwe kufuneka kuzaliswe ngemali.
Xa ukuhlawulwa kulungiswe kwi-RTGS / NEFT, i-Sand Pebbles kufuneka icetyiswe malunga neenkcukacha.
Xa kuthengiswa kwemali ye-Rs.25000.- okanye ngaphezulu, ikopi yekhadi le-PAN leKlayenti / Indwendwe kufuneka linikezwe.
Zonke iimbambano ziphantsi kolawulo lwezomthetho lwaseBhubaneswar kuphela.